GlobalNet | GlobalNet International IP Peering Capacity is Reached to 200 Gbps
GlobalNet International IP Peering Capacity is Reached to 200 Gbps
GlobalNet expands more than 20 Gbps global peering capacity with international carrier within 30 days during for the month of May 2021.
Despite recent developments are threatening many different ways across the country in Myanmar, International IP Transit Service traffic is keep growing and now total GlobalNet international IP peering capacity is reached to 200 Gbps in total.
GN peering carriers are CAT, Symphony, SingTel, NTT Communication, PCCW Global and much more.
Our GTC fiber infrastructure covers over 25,000 km to almost all major states & divisions in Myanmar and carrier coverage reaches to regional with 200 Gbps peering connectivity.
GTC launched the first international internet gateway to Global after MNOs. Currently, GTC internet traffic is 25% of Myanmar total internet traffic which represents key internet and infrastructure providers for the citizens of Myanmar.
Two out of four MNOs Networks are built on GTC Fiber infrastructure. Again, most of critical infrastructure services like financial institutions, ATM network, central bank and credit bureau network are running over our reliable, redundant, scalable and robust infrastructure.
GlobalNet ၏ ဆက်သွယ်ရေး၀န်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲသူ များနှင့် Business Partners များ ကို မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်း၏ Eureka Moments များကို ထပ်တူဂုဏ်ယူနိုင်ရန် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၂၀၂၁ခုနှစ်မေလ (ရက်ပေါင်း၃၀) အတွင်း၌ နိုင်ငံတကာ ကွန်ရက်များနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ချိတ်ဆက်ထား မှု့ ပမာဏ 20 Gbps အထိ ကွန်ယက် ချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ International IP Transit Service ကို လည်း တိုးမြှင့်၀န်ဆောင်မှုပေးခဲ့ရာ ယခုဆိုလျှင် 200 Gbps အထိ အောင်မြင်စွာ ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့သော ပထမဆုံး မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် နည်းပညာလုပ်ငန်းပင်ဖြစ်ခြင်း၊
GlobaNet သည် International Carrier များဖြစ်တဲ့ CAT, Symphony, SingTel, NTT Communication, PCCW Global အစရှိသော နိုင်ငံတကာရှိ နံမည်ကောင်းရရှိထားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နည်းပညာများ ကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပြီး လက်ရှိတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ၀န်ဆောင်မှု မှန်သမျှကို ချိတ်ဆက်ပေးနေသော နည်းပညာအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလည်းဖြစ်ခြင်း၊
GlobalNetရဲ့ Infrastructure သည် ကီလိုမီတာပေါင်း ၂၅၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဓိကပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အားလုံးနီးပါး တွင်ကွန်ယက်များကို ဖြန့်ကျက်ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ခဲ့သည်၊
GlobalNet ၏ မိခင် ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Global Technology Company သည် Mobile Network Operator များပြီးနောက် International Internet Gateway ကို ပထမဆုံး Launch လုပ်နိုင်ခဲ့သော ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာလုပ်ငန်းဖြစ်ခြင်း၊
Global Technology Company မှ၀န်ဆောင်မှုရယူထားသော အင်တာနက်အသုံးပြုမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိအင်တာနက် traffic ၏ ၂၅ % (ရာခိုင်နှုန်း) ဖြစ်နေပြီး Mobile Network Operator နှစ်ခု၏ Infractructre များသည် GlobalNet ၏ Fiber Infrastructure ပေါ် အခြေခံထားခြင်း၊
ဘဏ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ATMစက်များ၊ ဗဟိုဘဏ်နှင့် ချေးငွေ ဗျူရိုကွန်ယက်များ ကဲ့သို့သောအရေးကြီးသော အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀န်ဆောင်မှုများစွာတို့သည် GlobalNet ၏ ကွန်ယက်ပေါ်တွင် အခြေခံလျှက်ရှိခြင်း တို့ ပင် ဖြစ် ပါသည်။
သင်၏ စီးပွားရေးပန်းတိုင်ထံ လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာရောက်ရှိချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ GlobalNet (ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ အဖွဲ့အစည်း) က အသင့်ရှိနေပါတယ်။
? TO GET YOUR BUSINESS GOALS REACH OUT TO US TODAY! ?
? Learn more: www.globalnet.com.mm/
? +959 788 5000 92
GlobalNet ၏ မြန်နှုန်းမြင့် DIA...
GlobalNet ၏ Dedicated Internet ...
DIA January Promotion
ဇန်န၀ါရီလအတွင်း GlobalNet DIA Services ...
Right Data, Right Time...
ယနေ့ Banking Industry , ...